Adobe က Lightroom | November 2019
အဓိက Adobe က Lightroom
Lightroom ထဲမှာဥပမာ processing ဓာတ်ပုံများ
Adobe က Lightroom ထပ်တလဲလဲကြှနျုပျတို့၏ website ၏စာမကျြနှာပျေါမှာထငျရှားခဲ့သညျ။ ထိုအလုနီးပါးအခါတိုင်းတစ်ဦးအစွမ်းထက်, ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်. ထားသောစာပိုဒ်တိုများတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ သို့သော် Laytrume အတွက်ပုံရိပ်တွေ processing ခေါ်ဆိုမှု Self-လုံလောက်သောမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့, ဥပမာ, မျက်စိအရိပ်ဖြီးအပေါ်ပန်းချီဖို့, သင်ပိုရှုပ်ထွေးပြဿနာများကိုဖော်ပြခြင်းမ, နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်, အဲဒီမှာအလင်းနှင့်အရောင်နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့ကြီးသော tools များဖြစ်ကြပေမယ့်။
Adobe က Lightroom ထဲမှာမြန်ဆန်လွယ်ကူသောအလုပ်အတွက်ပူသော့
Adobe က Lightroom နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုအတွက်များစွာသောအခြားအစီအစဉ်များ, တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှိပါတယ်။ ပင်တစ်လအားလုံးကို functions တွေကျွမ်းကျင်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ကဲ့ကဖြစ်ကောင်း, မအသုံးပြုသူအများစုဖြစ်ပါတယ်။ တူညီပါကယ့်ပုံပဲ, အခြို့ဒြပ်စင်မှဝင်ရောက်ခွင့်အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရိုးရှင်းသော "ပူ" သော့အကြောင်းကိုဆိုပါတယ်နိုင်ပါသည်။
Adobe က Lightroom အသုံးပြုမှု၏အဓိကလမ်းညွန်
Lightroom သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ဤမေးခွန်းကိုအများအပြားအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဓာတ်ပုံဆရာတို့ကကြီးပြင်းနေပါတယ်။ program ကိုတကယ်မာစတာဖို့အတော်လေးခက်ခဲသည်ကြောင့်ဤအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမတော့ပင်ဒီမှာဓါတ်ပုံဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုမသိ! တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုသူအချို့တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၏သင်တန်း, အသုံးပြုဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ကြားချက်, created မရနိုင်ပါ။
Lightroom ထဲမှာပုံတူ retouching
ဓာတ်ပုံများ၏အနုပညာကိုကျွမ်းကျင်, သင်ပုံရိပ်တွေ retouching လိုအပ်အနည်းငယ်ချွတ်ယွင်းရှိစေခြင်းငှါဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ Lightroom ဿုံဒီတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးအကောင်းတစ်ဦးပုံတူ retouching အတွက်အကြံပြုချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်ခန်းစာကို: ဥပမာ Lightroom ထဲမှာဓာတ်ပုံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အသားအရေအသွင်အပြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အရေးအကြောင်းတွေနဲ့အခြားမနှစ်မြို့ဖွယ်အားနည်းချက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသောပုံတူ retouching Lightroom ထဲမှာပုံတူ retouching Apply ။
Lightroom ထဲမှာ batch အပြောင်းအလဲနဲ့ဓာတ်ပုံများ
အသုံးပြုသူတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်အရာကြွင်းလေကငျြ့သုံးနိုငျသောကွောငျ့ကို Adobe Lightroom ထဲမှာပုံရိပ်တွေ processing batch အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဒါကပုံရိပ်တွေအများကြီးပါလျှင်ဿုံသင့်လျော်လှည့်ကွက်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်အလင်းနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်။ သင်တဦးတည်း image ကိုတည်းဖြတ်နှင့်အခြားဖို့အဲဒီ settings တွေကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, တူညီတဲ့ settings ကိုနှင့်အတူဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားကိုင်တွယ်ရန်သူတို့ဘဝပိုမိုလွယ်ကူနှင့်မအောင် Lightroom ထဲမှာဓါတ်ပုံများ၏အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ပါ။
Adobe က Lightroom အတွက် Set ထုံးစံရလာဒ်ကဒိ
သငျသညျကိုအနည်းဆုံးဓာတ်ပုံများတွင်အနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားလျှင်, ဧကန်အမှန်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သင်၏အသက်တာအတွက် filter များအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ တချို့ကရိုးရိုးအဖြူအနက်ရောင်-and ဓာတ်ပုံ, အခြားအောင် - ပြောင်းလဲမှုအရောင်များ - ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, အခြားသူများ stylize ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထင်ရသောရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးစိတ်ဓါတ်များ, လွှဲပြောင်းဓါတ်ပုံတွေအပေါ်အတော်လေးတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်သည်။
Adobe က Lightroom - နာမည်ကျော်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသတ်မှတ်ထားဖို့ဘယ်လို
ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကပြန်ကျော်ကြား Adobe မှပုံရိပ်များ၏အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းပြောပါပြီ။ ထိုအခါမူကား, ငါတို့သာပျေါလှငျနှင့်အင်္ဂါရပ်ထိခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အားဖြင့်ငါတို့သည် Lightroom နဲ့အလုပ်လုပ်အချို့ရှုထောင့်ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်ထုတ်ဖေါ်ထားတဲ့သေးငယ်တဲ့စီးရီး, ဖွင့်လှစ်။ ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးသင်မှန်, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆို software ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်?
ကုသမှုအပြီး Lightroom ထဲမှာဓါတ်ပုံတွေကိုကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ဟန်မယ်လို့ - ဖိုင်ကို save လုပ်ပါ။ သို့သော် zamudreny အဖြစ်အချို့သောအစီအစဉ်များတစ်ရပ်မှတစ်ဦးအစပြုသူတင်ထားတဲ့တည်းဟူသောရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်။ "Save" button ကိုမှာအားလုံးဤအရပ်၌မရှိသောကွောငျ့တစျဦးကထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်အတွက် Adobe က Lightroom ပါ! "ပို့ကုန်" အစားမသိဘဲလူအားနားမလည်လည်းမရှိ။
Adobe က Lightroom ထဲမှာဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလုပ်နည်း
Adobe က Photoshop ကို Lightroom - သူတို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စု၏ဓါတ်ပုံများ၏ကြီးမားသောအစုံနှင့်တစ်ဦးချင်းကုသမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်ကအခြားကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်တင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပရင်တာကိုပေးပို့ဖို့အဘို့ကြီးစွာသောပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့နားလည်ဘာသာစကားမှာမရရှိနိုင်သောအခါဟုတ်ပါတယ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏မတူကွဲပြားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အများကြီးပိုလွယ်သည်။
သငျသညျပုံ၏အရောင်ကိုကြိုက်ဘူးဆိုရငျ, သင်အမြဲပြင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Photoshop မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါလိုအပ်သည့်မည်သည့်အထူးအသိပညာရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Lightroom ထဲမှာဆုံးမခြင်း, အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်ခန်းစာကို: သင်ကသင်၏ဓာတ်ပုံများကိုသငျသညျအရောငျဆုံးမခြင်းချင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် Lightroom ထဲမှာ processing ပုံဥပမာ Lightroom ထဲမှာအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ရယူခြင်း, ဒီ format နဲ့သင်ဘုံ JPG နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲပိုကောင်းအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, RAW format နဲ့ရုပ်တုဆင်းတုများကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © Adobe က Lightroom 2019